တရုတ် Wuxi အောင်မြင်မှု Machinery - Rotate welding တက်ကွက်တိ 100T
ဂျက်တက်စွမ်းရည်: 100 တန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည်အပိုင်းအစ: 50 တန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည်အစုံ: 100 တန်ချိန်အများဆုံး
ဂျက်တက်လမ်း: Hydraulic ဆလင်ဒါ
ရေယာဉ်များအချင်း: မင်း။ 800mm ~ Max.5000mm
ထိန်းချုပ်ရေးလမ်း: ကြိုးမဲ့ & Remote လက်ထိန်းချုပ်မှု
input ဗို့အား: 110V ~ 575V လူပျို /3အဆင့် 50 / 60Hz
Options ကို: ခရီးသွားအခြေစိုက်စခန်းသည် frame
FOB စျေး: ။ 1 * *** 00 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဟိုက်ဒရောလစ် Rotate welding အပိုင်းပရိသတ်တို့အားပုဒ်မနားလည်သဘောပေါက် welding.And ကျနော်တို့သာမန်အားဖြင့်အတူတူကိုယ့်ကိုယ်ကို-align သို့မဟုတ်သမားရိုးကျဂဟေ Rotate နှင့်အတူဤအမျိုးအစားကိုသုံးနိုင်သည်အထိ fit ။
ပုံစံ UP-100 FIT
စွမ်းရည်မြှင့်တက်ဂျက် 100 အတန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည်အပိုင်းအစ 50 တန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည် set ကို 100 အတန်ချိန်အများဆုံး
ရေယာဉ်များအချင်း min ။ 800mm ~ Max.5000mm
ထိန်းချုပ်ရေးလမ်း ကြိုးမဲ့ & Remote လက်ထိန်းချုပ်မှု
options ကို အခြေစိုက်စခန်းဘောင်ခရီးသွားလာ
roller ဂဟေဆော်ခြင်း Rotate ဖျေါပွခကျြဖွင့်ဟိုက်ဒရောလစ်နဲ့ Fit Up ကိုပိုက် :
1.Consist: တစ်ခုမှာစွမ်းအင်သုံး roller, တစ်ခုမှာ idler roller, နှစ်ဦး Hydrulic ညှိယူကြိတ်စက်, လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်က
2. ပိုက်လှည့်လိပ်စံပြအနေအထားတင်းပါးစည်းဝေးပွဲကိုဂဟေဆော်နေစဉ်အတွင်းကြိုးမဲ့လက်ထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့် system ကိုတက် / ဆင်းပေါက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ထကွက်တိ။
3. jack ကိုတက်စနစ်ဖြင့်လည်ပတ်တက်ကွက်တိဒါပေမယ့်သာ idler turning.Fit တက်ပိုက်ဂဟေ roller ကြိုးမဲ့ & အဝေးထိန်းသေတ္တာများကထိန်းချုပ်ထားသည်။
4. အတူတကွ Rotate သို့မဟုတ်သမားရိုးကျဂဟေ Rotate welding မိမိကိုယ်ကို Align လုပ်ခြင်းနှင့်အတူအသုံးပြုခြင်း။
6. roller ပစ္စည်းကိုလည်းအနက်ရောင်ရော်ဘာသို့မဟုတ် Polyurathane roller ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
7. 100% မူရင်းထုတ်လုပ်သူ-Wuxi အောင်မြင်မှုစက် CO ထံမှအသစ်သော။ , LTD မှ
1.Our ဂဟေဆော်ခြင်း roller ကုတင်အင်ဗာ Danfoss / Yaskawa ကနေဖြစ်ပါတယ်။
2.Our ဟိုက်ဒရောလစ်ဂဟေ Rotate မော်တော် Invertek ကနေဖြစ်ပါတယ်။
3.Our ဟိုက်ဒရောလစ်ဂဟေ Rotate လျှော့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကနေဖြစ်ပါတယ်။
4.Our ဆန့်ကျင်ပျံ့ဂဟေ Rotate လျှပ်စစ်စနစ်က Schneider ကနေဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်မှ Rotate welding နှင့်အတူဥရောပစျေးကွက်နှင့် CO လက်မှတ်များမှ 5. အီးလက်မှတ်များ။
အထူးသဖြင့်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်များအတွက် 2. ဖိအားတန်ဆာကိုဂဟေ။
3. ပိုက်ကရေနံတိုင်ကီ, ရေတိုင်ကီအဖြစ် industries.such ထုတ်လုပ်။
5. ဓာတု & လောင်စာဆီသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများဂဟေ။
1.The Rotate အပြည့်အဝသစ်သားအမှု၌ဖြန့်ဝေဘို့အထုပ်မတိုင်မီ installed ပါလိမ့်မည် welding တက် fit ။
လိုအပ်ပါက 2.We လည်းသင့်ရဲ့အလုပ်ဆိုင်မှာတပ်ဆင်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့။
Rotate အရည်အသွေးနှင့်အပိုပစ္စည်းများအတွက်ထောက်ခံအခမဲ့ welding မထိုက်မတန်တက်ဘို့ 3.One တစ်နှစ်အာမခံ။
ဂဟေဆော် Rotate, ဂဟေဆော်နေရာချ, ဂဟေဆော်ခြယ်လှယ်သုံးပိုက်လိပ်လှညျ့ဖိအားရေယာဉ်များ Rotate welding, သမားရိုးကျဂဟေ Rotate, ပိုက်အကြံပေးအဖွဲ့ဂဟေ totator, လည်ပတ်ဂဟေဆော်စက်, Automatic, Hydraulic ဂဟေဆော်ခြင်းသည် Roator တက် fit, jack ကိုတက်ဂဟေ roller, သဲပေါက်ကွဲမှု Roll ဖွင့် ဂဟေဆော် roller, Tank ကြိတ်စက်ဂဟေဆော်စက်, Cylinder ပိုက်ဂဟေ rotate, သမားရိုးကျ Tank Rolls ဖွင့်, ဦးခေါင်းကိုအမြီးစတော့ရှယ်ယာဂဟေနေရာချ, ဟိုက်ဒရောလစ်ဂဟေနေရာချ, welding positioer, အလျားလိုက်ဂဟေနေရာ, အမြင့်ညှိယူဂဟေနေရာချရုတ်သိမ်းပေးရန်, စားပွဲတင်ဂဟေနေရာချ Turn, စားပွဲတင်ဂဟေနေရာချ Turn , ဂဟေဆော်ကော်လံစန်း, အော်တိုဂဟေဆော်ခြင်း Boom, Tank ပိုလန်စက်, ကော်လံနှင့်စန်း, ကော်လံပြီးတော့ Boom ခြယ်လှယ်, ကော်လံစန်းဂဟေဆော်လုပ်ငန်း, အော်တိုကော်လံနှင့်စန်းဂဟေခြယ်လှယ်။
ယခင်: 60T Rotate welding တက်ကွက်တိ
နောက်တစ်ခု: 300KG ဂီယာ tilt နေရာချ
စံဝေးလံခေါင်ဖျားလက်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာနှင့်ခြေလျင်နင်း control.it အဆင်ပြေပြေနဲ့လုံခြုံနှင့်အတူ 1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမားရိုးကျဂဟေ Tank ဖွင့် Rolls အားလုံးများမှာ
ပိုက်ဂဟေ roller တဦးတည်းတပြင်လုံးကိုကွန်တိန်နာအဘို့အလုံလောက်အောင်အရေအတွက်အမိန့်လျှင်, ငါတို့သည်တိုက်ရိုက်ကွန်တိန်နာသို့ထုပ်ပိုးပါလိမ့်မယ်2။
ဤတွင်အချို့သော Tank ဓာတ်ပုံများကိုအလုပ်လုပ်ဂဟေလိပ်လှည့်နှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 2. မိမိတို့၏အလုပ် site မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များတုံ့ပြန်ချက်ကနေအားလုံးဖြစ်ကြသည်။
မက္ကစီကို 30T သမားရိုးကျခဲဝက်အူပိုက်ဂဟေပြောင်းလဲ roller
ITALY 40T နှင့် 100T Bolt ကညှိယူ Tank ဂဟေ Rotate
ကွန်ဗင်းရှင်းပိုက်ဂဟေ roller အကြီးစားရေယာဉ်များအလုပ်လုပ်အမေရိကန် 40T ။
60T Rotate welding တက်ကွက်တိ
5T Rotate welding တက်ကွက်တိ